Homeसमाचारभाइरल भइन्छ भन्दै टिकटक बनाउन पुल बाट हा’मफाल्दा, नदीले संजयलाई बे’पत्ता बनायो (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 12, 2021 admin समाचार 2950
पछिल्लो समय टिकटक लो’कप्रिय बन्दै गएको छ । टिकटकले नयाँ अनुहारलाई चर्चाको शिखरमा पुर्या’इदिएको छ । भने धेरैलाई नाम र दाम पनि कमाउन सहयोग पुगेको छ । तर टिकटकमा भा’इरल हुन हुने हो डबा जीले केही अ प्रिय घ’टनाहरु पनि घ’टेको पाइन्छ । यस्तै घट’ना कैलालीमा पनि घटेको छ । टिकटक बनाउन कर्णाली चिसापानी पुलबाट हा ‘म फ ले का एक किशार वे प’त्ता भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका वडा नम्बर २ का १८ वर्षीय सञ्जय खड्का कर्णाली नदीमा बे’पत्ता भएका हुन् । उनले शनिबार दिउँसो कर्णाली पुलबाट हा ‘म फा ले को कैलाली प्रहरीले बताएको छ । उनको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रति’क बिष्टले जानकारी दिए ।
यस्त्ै १८ वर्षीय लोकेश प्याकुरेल घा इ’ ते भएका छन् । लम्किचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ का प्याकुरेललाई नेपालगञ्‍ज उप:चारका लागि लगिएको छ । उनको छा ती मा चो ट’ ला गे को छ । उनीहरुसँगै न दीमा हा म’ फालेका १७ वर्षीय बिरेन्द्र सिंहको भने स:कुसल उ’द्धा’र गरिएको छ । उनीहरु सबै एकै विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी हुन् । इताजा खबरबाट
May 27, 2021 admin समाचार 2675
April 9, 2021 admin समाचार 3161
December 25, 2020 admin समाचार 5386
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215254)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207011)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206669)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (205580)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204376)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203612)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201858)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201701)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194009)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170792)